“ ကွာရန်တင်း “ ထားရှိခဲ့သူ ၁၁-ဦးတို့၌ ရောဂါကူးစက်ပုံအသစ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဗြိတိန်၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲအသစ်ကူးစက်မှုကို ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ရှိဟု စင်္ကာပူပြောဆို။ ဗိုင်းရပ်စ်၏ ဗီဇပုံသဏ္ဍာန်သဘာဝကို အတည်ပြုနိုင်ရန် လတ်တလော ဥရောပမှဝင်ရောက်လာသူများအား စစ်ဆေးလျှက်ရှိ – H2Oupdatenews
“ ကွာရန်တင်း “ ထားရှိခဲ့သူ ၁၁-ဦးတို့၌ ရောဂါကူးစက်ပုံအသစ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဗြိတိန်၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲအသစ်ကူးစက်မှုကို ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ရှိဟု စင်္ကာပူပြောဆို။ ဗိုင်းရပ်စ်၏ ဗီဇပုံသဏ္ဍာန်သဘာဝကို အတည်ပြုနိုင်ရန် လတ်တလော ဥရောပမှဝင်ရောက်လာသူများအား စစ်ဆေးလျှက်ရှိ
နိုင်ငံအတွင်း “ ကွာရန်တင်း ရောဂါခြေချုပ် “ ထားရှိခဲ့သူ အခြား ၁၁-ဦးတို့၌ ရောဂါကူးစက်ပုံအသစ် ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိကြောင်း ကနဦးရလဒ်များအရ အတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက် ဗြိတိန်၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲအသစ်ကူးစက်မှုကို ပြည်တွင်း၌ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ရှိရကြောင်း စင်ကာပူနိုင်ငံက သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်ဟု Reuters က ယနေ့ ရေးသားသည်။….
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအားလုံးတို့သည် ဥရောပမှ ဝင်ရောက်လာသူများ၌ တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာအဆောက်အအုံ၌ ၁၄-ရက်ကြာ ကွာရန်တင်းထားရှိစဉ် သို့မဟုတ် ဆိုက်ရောက်ချိန်၌ သီးခြားခွဲထုတ်ထားစဉ် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်လျှက်ရှိကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှင့် နီးကပ်စွာထိတွေ့ခဲ့သူ အားလုံးတို့ကိုလည်း စောစောပိုင်းကတည်းက ကွာရန်တင်း ချထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။….
သို့သော်လည်း ပြည်တွင်းနေ အများပြည်သူတို့၌ အဓိကအားဖြင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် အများဆုံးဖြစ်ပွားနေသည့် B117 ကူးစက်မှုပုံစံမျိုး ရောဂါပျံ့နှံ့နေသည့် အထောက်အထားများ လောလောဆယ် မတွေ့ရှိရကြောင်း စင်္ကာပူကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌ ပြောဆိုသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံသည် ဥရောပမှ လောလောဆယ်ရောက်ရှိလာသူများတွင် Covid-19 ရောဂါအသွင် ဖြစ်ပွားမှုများအတွက် ဗိုင်းရပ်စ်၏ ဗီဇပုံသဏ္ဍာန်သဘာဝကို အတည်ပြုနိုင်ရန် စစ်ဆေးလျှက်ရှိသည်။ ….
နိုဝင်ဘာ ၁၇ နှင့်ဒီဇင်ဘာ ၁၇ အကြား ဥရောပမှ စင်္ကာပူသို့ ဝင်ရောက်လာသူများအနက် ၃၁-ဦးတွင် ယခု ကူးစက်မှုပုံစံကို တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုလ၌ Covid-19 ရောဂါ ကူးစက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ ….
ဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်မူကွဲ ကူးစက်လျှက်ရှိသူသည် ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့၌ အင်္ဂလန်မှ စင်္ကာပူသို့ရောက်ရှိလာသူ ဖြစ်သည်။ ဆိုက်ရောက်ချိန်၌ ကွာရန်တင်း ထားရှိခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်လျှက်ရှိကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ခရီးသည် အမျိုးသမီးနှင့် နီးကပ်စွာ ထိတွေ့ခဲ့သူအားလုံးကို ကွာရန်တင်းထား ရှိခဲ့သော်လည်း သတ်မှတ်ကာလပြီးဆုံးချိန်၌ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ထားခြင်းမရှိကြောင်း “ နဂ္ဂတစ် “ အဖြေ ထွက်ခဲ့သည်ဆို၏။….
ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနကမူ အခြား ကူးစက်မှု ၁၁-ခုကိုလည်း အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ရန် ကျန်ရှိနေကြောင်း၊ ထပ်မံကူးစက်ခြင်းမရှိစေရန် ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေ ကွင်းဆက်ကို တားဆီးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
နိုင်ငံ၌ ဒေသတွင်း ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအသစ် သုံညနီးပါးရှိနေခဲ့သော စင်္ကာပူသည် ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်လာသော ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအသစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် မကြာသေးမီ အင်္ဂလန်သို့ခရီးသွားခြင်းနှင့် ခရီးသွားလာသူများအား တားဆီးရသည့် သမိုင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ကြုံတွေ့ရလျှက်ရှိသည်။
#ဗြိတိန်၏_B117_ဗီဇပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကူးစက်မှု #စင်္ကာပူ၌ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိ ….
((( Reuters., December 24th, 2020, “ What you need to know about the coronavirus right now .” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၏ အချင်းအတွင်း မိုက္ကရိုစကုပ်ဖြင့်သာ မြင်ရသည့် ပလတ်စတစ်မှုန်မွှားစများကို အံ့သြတုန်လှုပ်ဖွယ် တွေ့ရှိ။ လူ့ဆဲလ်သက်သက် မဟုတ်တော့ဘဲ ဇီဝဖြစ်တည်မှုနှင့် အင်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ ရောနှောတည်ဆောက်ထားသည့် “ ဆိုင်ဘော့” ကလေးငယ်နှင့် ပမာတူ
Next Next post: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ မူကွဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်နေဟု ဆို။ ဗိုင်းရပ်စ်တွင် ဗီဇပြောင်းလဲပုံမှာ ဗြိတိန်၌ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသော ကူးစက်မှုအလွန်မြန်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် အလားတူနေဟု ပြော။ နိုဝင်ဘာစောစောပိုင်းတည်းက တွေ့ရှိခဲ့